I-TinyAlarm - i-Alarm Clock ye-Mac App (ayisaxhaswa, ngoku SIMAHLA) | Plum emangalisayo
Asanda: 2 / 4 / 20
I-TinyAlarm-I-Alarm Clock ye-Mac App (ayisaxhaswanga, ngoku SIMAHLA) ubuninzi
I-TinyAlarm-Alarm Clock iMac usetyenziso
Isandi esincinci kodwa esinamandla kwimenyu yakho. Dlala isandi esikhethiweyo (isandi senkqubo, esithethwe ngu-siri okanye irekhodwe nguwe) ixesha elizayo. Elula, akukho ncwadana ifunekayo. Kukulungele ukudlala, ukwenza iinkqubo, ungaphoswa kukuqeshwa okanye ixesha lokupheka isidlo sangokuhlwa ukuze kungatshi. Yenza ii-alamu oza kuzisebenzisa emva koko ucofe kwimenyu ukuphinda uzisebenzise nangaliphi na ixesha ezifunekayo.
Lonke uqwalaselo lwenziwe kusetyenziswa umxholo wemenyu yenqaku. Ukucofa ujikeleze kufuneka kutyhila malunga nayo yonke into ekhoyo malunga neTiny Alarm. Ndiyacela Ukukhuphela uze uzame.
I-TinyAlarm iya kukunceda wenze umthambo xa uhamba kwidesika yakho ixesha elide, uphephe ukuphoswa yibhasi yakho, ukutshisa ipitsa yakho, okanye ukufika kade ezintlanganisweni.
I-TinyAlarm ifuna iMac Intel kunye ne-OS X 10.5 okanye kamva.
IiTeraTalks 4 / 14
- Umcimbi osisigxina kunye nomhla wokubeka kunye nomhla. emva kwexesha ukuseta ukutshintsha umhla wokubuyisela kwakhona kwinto ebikade ilungisiwe, igqityiwe. ixelwe ngumsebenzisi. enkosi vince
-khupha ialam nge-alamu kusuku olulandelayo.
- Umba wokudibanisa ulungisiwe
-inguqulelo ezininzi zokwenza icandelo 'Thatha u-5' lifane ngakumbi nelinye kwi-iClock
-ukongeza kwimenyu yokuqalisa 'Thatha i-5', yeka kunye nokukhetha.
- 'thatha u-5'
-Imodeli yomsebenzisi ehlaziyiweyo
-ukulungiswa kwe-bug encinci
-ihlaziyiwe kwaye yadityaniswa kwi-xcode yamva nje
Kuya kufuneka ukuba ukhuphele le nguqulo ngesandla kwaye uyitshintshe. kukhuphelo lwexesha elizayo kwaye uhlaziyo luya kuba lula.
-Ukuphuculwa kwexesha kunye nokukhethwa komhla. unokukhetha iintsuku kunye nolunye utshintsho.
-Khangela uhlaziyo (sparkle) ngoku luyasebenza.
-lunye ulungiso ku-ui
gcina iingcebiso ezizayo. enkosi kubo bonke abasebenzisi.
ukuba unayo inguqulelo yakudala kungafuneka uyikhuphele ingxelo yokugqibela ngesandla kwi-https
-parkle ngoku iyakujonga uhlaziyo lweinguqulelo ezizayo.
-Ukuphuculwa kwe-ui kunye neempawu zongezwa kwi-5
- izandi ezongeziweyo ukuthatha u-5
- yongeza ezinye izandi kwii-alamu
-i-alamu kwaye uthathe i-5, kwi-appalalarm yethu, ngoku zombini ikwi-iclock. iclock yethu yinto yethu yonke into enento yokwenza nexesha. sisixhobo ukunceda abantu balawule ixesha.
-ezimbalwa ezincinci zokulungiswa
-ngezwe ii alarms ezininzi
-Imeko / ingxelo yokujonga kwakhona malunga nokusetwa kwealam.
-izaziso zasendaweni yeapile esetyenzisiweyo. ukuba useta i-alam kwaye uyeke iincinci ezincinci uya kungena kwizaziso kwicala elifanelekileyo ngo-10.8
-ngoku ine-alamu ezisebenzayo nezingasebenzi. ukungasebenzi kungakhethwa kwaye kusetyenziswe kwakhona.
-ngezelwa indawo yokutsala isandi nomculo kwi-iTune okanye ezinye iinkqubo.
-Ukutshintsha ukhetha ukuxela ixesha lesandi.
-Iqhosha elongeziweyo likhetha ukuyeka ukudlala isandi.
-Utshintshiwe ukhetha ukuyeka ukudlala isandi sangoku, udlale isandi esitsha.
-I alarms eziguqulweyo ukuze iyeke ukudlala isandi xa icinyiwe isivusi.
-ophawu olutsha uphawu kunye ne-1024 icon yokubonisa i-retina
-isayinwe ku-10.8 ukuze ihlangane nezikhokelo zokhuseleko lweapile.
-dityaniswe kwi-xcode yamva nje.
-ongezwe igama lokuthetha njengelumkiso yesandi
-sibulela kubo bonke abasebenzisi ngengxelo. ngakumbi kuza kungekudala ....
I-1024 icon yokubonisa i-retina
-isayinwe ngoku ngu-10.8
-ophawu olutsha uphawu
-isayinwe kunye nomgcini-sango kulandela izikhokelo zokhuseleko zama-apile.
-ukusebenza ngoku nangoku xa uphinda-phinda de kucace ukuba akavavanywa.
[Fixed] khetha zonke, cut, Ukhuphelo, Ucolo ngoku osebenza Yencoko yababini Registation